Ugu yaraan 16 qof oo ku geeriyooday qaraxyo kala duwan oo ka dhacay gudaha caasimada Afghanistan ee Kabul - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 16 qof oo ku geeriyooday qaraxyo kala duwan oo ka dhacay gudaha caasimada Afghanistan ee Kabul
March 1, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Dadka ku dhaawacmay qaraxyada ayaa loola cararay isbitaalada. [Xigashada Sawirka: EPA]
Kabul-(Puntland Mirror) Taalibaan ayaa weerartay bartilmaameedyo kala duwan oo kuyaala gudaha caasimada dalka Afhanistan ee Kabul, ilaa iyo 16 qof ayaa ku dhimatay weeraradaas oo dhacay maanta oo Arbaco ah.
Gaari qarax laga soo buuxshay ayaa maanta ku qarxay xarun booliis oo kutaala qaybta galbeed ee Kabul, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha.
Wax yar kadib, qarax gaari oo kale ayaa lagu dhuftay albaabka xarunta nabadsugida qaybta kutaala bariga Kabul, sida uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu.
“Nasiib daro 16 qof ayaa lagu dilay labadaas weerar ee ka dhacay Kabul,” sidaa waxaa warbaahinta u sheegay Waheed Majroh, oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka, isaga oo intaas ku daray in 44 qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
Ururka hubaysan ee Taalibaan ee ka dagaalama gudaha dalka Afghanistan ayaa sheegtay masuuliyada weerarkaas.